बसिबियालो : आउनुहोस्, एउटा बगैंचा बनाऔं | Nepal123.com
Posted in गृह सजावट
बसिबियालो : आउनुहोस्, एउटा बगैंचा बनाऔं
Author: Binod Ghimire Published Date: March 26, 2020 LeaveaComment on बसिबियालो : आउनुहोस्, एउटा बगैंचा बनाऔं
कति कोरोनाको कुरा गर्ने ? एकछिन यी सबै कुरा छाड्नुहोस् । मन र मस्तिष्कबाट कोरोनालाई ‘डिलिट’ गरिदिनुहोस् । बरु यो मौकामा एउटा बगैंचा निर्माण गरौं ।
बगैंचा भन्नसाथ तपाईंले घर–आँगनमा खुला ठाउँ नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन । यदि त्यस्तो ठाउँ भए त काइदा हुन्छ । नभए पनि निको छ ।
तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ छत त छ नि । बार्दली छ नि । वा कुनै खुला ठाउँ त पक्कै छ ।
त्यसो हो भने तपाईंले पुदिना, धनिया, खुर्सानी, प्याज, लसुन वा फूलहरु रोप्ने ठाउँको अभाव हुनेछैन । सजिलै सर्ने र हुर्कने प्रकृतिका घिउकुमारी जस्ता उपयोगी वनस्पति रोप्नका लागि ठाउँको अपुग हुनेछैन । यसमा तपाईंको आवश्यक्ता र तपाईंसँग उपलब्ध कुरालाई प्राथमिकतमा राख्न सक्नुहुन्छ । हुनसक्छ, यसले तपाईंको खाँचो वा अभाव टार्नेछैन । यसरी रोपेर उत्पादन गरेका खानेकुरा तपाईंका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । तर, अहिलेको क्षणमा तपाईंका लागि रमउने गजब बहाना हुनसक्छ । तपाईं मात्र हो र ? बालबच्चालाई काम गर्न सिकाउने काइदा पनि हुनसक्छ ।
मोवाइल वा ल्यापटपमा झुन्डिरहेका बालबच्चालाई तपाईंले यी सबै काममा सहभागी गराउनुपर्नेछ । यसबाट उनीहरुको अनुत्पादक समय रचनात्मक काममा मोड्न सकिनेछ । बाली र बगैंचाको काम सिक्नेछन् ।
यतिबेला तपाईंलाई चाहिनेछ केही गमला, माटो, मल । गमलाका लागि थुप्रै विकल्प छन् । घरमा चामलको खाली बोरो, प्लाष्टिकका भाँडा, झोला । यस्ता सामग्रीले &#23
Tagged गृह सजावट
← भारतमा कोरोनाबाट मृतकको संख्या १३ पुग्यो, ६०० बढी संक्रमित
कोरोना भाइरस मानव जातिकै लागि जोखिम : राष्ट्रसंघ →